Akụkọ - Gini mere Ola Pealu Gị Ji Apụ Ahịa?
Gini mere Ọla Pearl Gị Ji Apụkarị?
Enweela akụkọ banyere akụkọ gbasara ego ọnụahịa a na-enyo enyo na ebe a na-anwale ọla: Maazị Chou ji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ USD1,500 iji zụta nwunye ya otu olu olu mmiri dị mma, mana ka ọ gachara otu oge ọkọchị, olu olu pel ahụ nwunye ya na-eyikarị. shrank fọrọ nke nta ka 1.5mm, na elu ghọrọ mkpumkpu.
Maazị Chou chere na ọ zụrụ nke adịgboroja, ya mere o weghara olu olu ya n’ebe a na-eme nnwale iji mata ya. Ma ihe ọ rụpụtara karịrị atụmanya ya. Nsonaazụ nyocha ahụ gosipụtara na pealu ahụ bụ eziokwu. Ihe mere nkume pel ahụ ji wee daa wee bụrụ ihe na-adịghị mma bụ n'ihi ejiji na-ekwesịghị ekwesị na corrosion nke acid.
Akụkụ mmiri bụ isi nke mebere pealu bụ Aragonite na Calcite (ihe dịka 82% -86%), yana 10% -14% peelin pearl na mmiri 2%. Abụọ mineral ndị mejupụtara nkume pel bụ calcium carbonate (CaCO3), ike ndọda nke aragonite bụ 2.95, ike bụ 3.5-4.0, ike ndọda kpọmkwem nke calcite bụ 2.71, na ekweghị ekwe bụ 3, yabụ pearl ahụ na-emebi emebi.
Ebe ọ bụ na akụrụngwa nke pel bụ calcium carbonate, mgbe mkpụrụ pel na-abanye na ihe ndị acidic (dị ka ọsụsọ, mmiri pọmpụ, wdg), elu ahụ ga-emebi. N'ihi na ike ya adịghị elu, esemokwu nke ụfọdụ ihe siri ike ga-emebi pealu.
Na mgbakwunye, mgbe a kpọtụrụ pel na ihe na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ, ọ ga-eji nwayọ nwayọ, jiri nwayọ belata mmiri, na Aragonite ga-agbanwe ka ọ bụrụ calcite, na-eme ka pealu ahụ jiri nwayọ belata.
Ọ bụrụ na ị hụrụ ọla n'anya ma na-azụkarị ọla pel, ị ga-amata na ọ dị mkpa ka a rụgharịa ọla yana dochie ngwa ndị ọzọ na oge oge.
Post oge: Jun-25-2021
Freshwater Pearl Bridesmaid Onyinye, White Gray Freshwater Ọla Pel, Aaa Mmiri Ugo, Ọla Ntị Agbamakwụkwọ, Pearl Stud ọla ntị, Ezigbo Omenala Cultured Freshwater Pearl,